Waraysi-Afhayeenka wasaaradda amniga oo aan ka waraysanay qaraxyo laga maqlay Muqdisho. – Radio Daljir
Luulyo 26, 2016 3:24 b 0
Muqdisho, July 26 2016--Qaraxyo xoogan ayaa saaka lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho , iyadoona laba qarax oo baabuur nooca waawayn ee xamuulka qaada loo adeegsaday uu ku qarxay albaabka hore ee garoonka.
Afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa radio Daljir uga waramay sida ay wax u dhaceen. Maxamuud Cabdi Ibraahim ayaa ka waraystay.
DHEGEYSO-Garoowe oo loo magacaabay gudiga xalinta khilaafaadka dhulka.